Maleeshiyaatka Xuuthiyiinta Oo Lagu Weeraray Gobalka Raddaac. – Calamada.com
Maleeshiyaatka Xuuthiyiinta Oo Lagu Weeraray Gobalka Raddaac.
Wararka ka imaanaya gobalka Raddaac ee dalka Yemen waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay dagaalo culus ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobalkaasi.
Ciidamada Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Jaziiratul Carab ayaa weeraro saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyo ciidamada Xuuthiyiinta ay ka sameysteen tuulooyin hoostaga deegaanka Qeyfah ee gobalka Raddaac.
Saldhigyada Xuuthiyiinta lagu weeraray ayaa kala ah saldhiga Gowl Sacad iyo saldhiga lagu magacaabo Nasiib Kilaab waxeyna labadaan saldhig ku wada yaalaan Tuulada Al-cable oo ka tirsan gobalka Raddaac.
Warbaahinada qaar ee dalka Yemen ayaa baahiyay in weeraradaasi khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay maleeshiyaatka Xuuthiyiinta oo duulaan ku qabsaday qeybo ka mid ah dalkaasi.
Dagaaladan ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal ah oo loo dhigay kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka Xuuthiyiinta lagu dilay sarkaal sare oo Xuuthi ah kaasi oo lagu magacaabi jiray Abuu Cadhaa waxaa sarkaalkan lala dilay Saddex ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah.
Weerarkan Kamiinka ah oo ay fuliyeen ciidamada Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Jaziiratul Carab waxa uu sigaar ah kaga dhacay duleedka deegaanka Yaryam oo ka tirsan gobalka Ib ee dalka Yemen.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 16-07-1438Hijri.
Next: Dhageyso Shabaabul Mujaahidiin Oo Soo Bandhigay Ku Dhawaad 10 Askari Oo Kasoo Goosatay Dowlada Federaalka.